Kulanka wasiirrada caafimaadka EU-da - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kulankii wasiirada Midowga Yurub, foto: Henrik Montgomery/sconpix.
Patienternas rörlighet en HET potatis för EU
Kulanka wasiirrada caafimaadka EU-da
La daabacay onsdag 8 juli 2009 kl 10.14
Wasiirada caafimaadka ee Midowga Yurub oo markii ugu horreysay dhacaya ilaa intii uu dalkaan Iswiidhan la wareegay xilka gudoonka Midowga Yurub.Kulanka wasiirrada caafimaadka ee Midowga Yurub ayuu qabtey wasiirka caafimaadka Bulshadda Maria Larsson iyo wasiirka bulshadda Göran Hägglund.
Wasiirada caafimaadka ee Midowga Yurub oo markii ugu horreysay dhacaya ilaa intii uu dalkaan Iswiidhan la wareegay xilka gudoonka Midowga Yurub.Kulanka wasiirrada caafimaadka ee Midowga Yurub ayuu qabtey wasiirka caafimaadka Bulshadda Maria Larsson.
Kulankan oo ka biloowday maantey oo isniina magaalada Jönköping, ayaa ha kii ugu horeeyay kulamsdii wasiirada Ururka mIdowga Yurub, waxaana kamida siyaasada lagu gorfeena hayo sidii looga hortagi lahaa waxyaabaha lidka ku aha horumarka caafimaadka iyo ka baaraan daga dhibaatooyinka jira, sida, sidii loogu heli lahaa Antibayootik ku filan faayruska caalamka ku faafay(A/H1N1), wacyi galinta dhibaatooyinka Qamradda iyo ilaalinta xaquuqda bukaan socodka. Kulankaan ayaa socon doona labo maalmood, kadibna waxaa bilaaban doona kulamadda ay yeelana hayaan wasiirada, shaqada iyo shaqaalaha iyo kuwa caymiska bulshada.
Kulankii wasiiradda caafimaadka